Xafladii Soo dhaweenta buugga Cusub ee London | Gedoonline
Xafladii Soo dhaweenta buugga Cusub ee London	Added by Gedoonline on March 5, 2012.Saved under Arrimaha Bulshada, Latest News, World	Xaflad si weyn loo soo agaasimay oo ku saabsaneeyd buug cusub oo dhawaan la qoray ee uu qoray qoraa Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Mohamed Ibraahim Shire.
Waxaa buuggan uu xambaarsan yahay taariikhda muggaleh la soo bandhiigay qoraaga buggan Cabdicasiis Ibraahim Cali (Xildhibaan).
Xafladii Soo dhaweenta buugga Cusub ee London, 3rd March 2012 “Somali President Mohammed Siad Barre, His Life and Legacy”
Waxaa uu buugan ku saabsan yahay waxqabadkii Kacaankii 21kii October 1969 ilaa 26kii Janaayo 1991 iyo waliba taariikh nololeedkii A. U. N Jaalle Mohamed Siyaad Barre.
Xafladddan ayaa waxaa si mug buuxa leh oga hadlay maddaxdii qarankii Soomaliyeed,aqoonyahano, dhalinyaro Soomaliyeed iyo dadkale oo aad u farabadan. Madaxdii iyo masuuliyiintii ka hadashay ayaa waxay ahaayeen masuuliyiin aad u xusto taariikhda dalka Soomaaliya iyo weliba geeska Africa.
Bandhig loo qabtay websiteka cusub ee Radio Ergo +Sawiro
One Response to Xafladii Soo dhaweenta buugga Cusub ee London	abdinasir shekh(nero) March 8, 2012 at 2:14 pm	ASC si aad aiyo aad ah ayaan ugu faraxsanahay qoraalka buugaan ,waana wax loo baahnaa in helo.waloow aanan akjhrinin weli oo aanan helin buugaan.
taariikhna ma qarsoonto ayadaa is wadayso ,waxaana markastaa wanaagsan in la sheego qofka muwaadinka ah waxa uu galo ama gudo.